PageRank: Aragtida Newton ee Aragtida Cufis-jiifka | Martech Zone
Sabtida, Diisambar 29, 2007 Axad, Sebtembar 20, 2015 Douglas Karr
Aragtida Newton ee ku saabsan cufisjiidadka waxay sheegaysaa in xoogga u dhexeeya cufnaanta uu u dhigmo wax soo saarka labada miis iyo in uu si isku mid ah ugu dhigmayo laba jibbaarada masaafada u dhexeysa dadkaas
Aragtida culeyska culeyska
F waa baaxadda xoogga cuf isjiidadka u dhexeeya labada dhibic dhibic.
G waa cuf isjiidashada.
m1 waa cufka dhibcaha ugu horreeya.
m2 waa cufka dhibcaha labaad.
r waa masaafada udhaxeysa labada dhibic dhibic.
Aragtida Lagu Adeegsaday Webka:
F waa baaxadda xoogga loo baahan yahay si loo kordhiyo darajada mashiinkaaga raadinta.
G waa (Google?) joogto ah.
m1 waa caan ka ah websaydhkaaga.
m2 waa caan ka ah websaydhka aad rabto inaad kugu xirto.
r waa masaafada udhaxeysa qiimeynta labada degel.
Mashiinnada raadinta ayaa bixiya joogtaynta go'aamisa baaxadda xoogagga u dhexeeya labada degel. Adoo horumarinaya algorithm adag oo ah PageRank kaas oo ka kooban isku xirnaanta dhabarka, maamulka, caannimada iyo xitaa soo noqoshada, makiinadaha raadinta ayaa xakameynaya joogtada ah.
Qiyaas Google inuu yahay telescope-ka oo raadinaya meerayaasha ugu waaweyn iyo balooggu inuu yahay caalamka.
Ma aqaano haddii Larry Page ('Bogga' ku yaal PageRank) iyo Sergey Brin ay dhab ahaan is barbar dhig ka sameeyeen aragtida Newton markii ay soo saareen algorithm (yada) aasaasiga ah ee xambaarsanaa Google xiddignimo. Fahamka aragtidan iyo ku dabaqidda websaydhku waa hal dariiqo oo lagu eego Suuq-geynta Mashiinka Raadinta, in kastoo. Sidoo kale, waxaan u maleynayaa inay tahay wax iska caadi ah oo quruxsan in isbarbar dhigi karo.
Marka - haddii aad rabto inaad ku hesho darajo ka sarreysa Mashiinka Raadinta, waxa ugu fiican ee lagaa doonayo ayaa ah inaad hesho bogag kale oo si fiican ugu qiimeeya ereyada muhiimka ah ee u dhigma oo aad aragto haddii aad ka heli karto dareenkooda. Hadday ku siiyaan xoogaa feejignaan ah, xoogga la adeegsaday ayaa kugu soo dhowaan doona iyaga. Blog-yada leh tiro aad u tiro badan (er… PageRanks) waxay awoodaan inay soo jiidaan bogag kale oo yaryar.
Suuqgeeyaasha Raadinta ayaa aqoonsan Aragtida
Xidhiidhada la bixiyay hadda labadaba waa kuwo caan ah oo oo ay weerareen Google. Google waxay tixgelineysaa xiriiriyeyaasha la bixiyay inay si dabiici ah u wadaan natiijooyinka raadinta dabiiciga ah iyo soo jiidashada bogagga taas, laga yaabee, inaysan u qalmin. Dad badan oo wax qora (anigana aan kujiro) u aragto inay ka faa’iideysaneyso awooddooda shaqo adag.
Ku dhowaad maalin kasta waxaan helayaa dalabyo ka imanaya ganacsiyada sharciga ah ee raba inay ka faa'iideystaan ​​degelkeyga si aan u soo jiito tooda. Anigu si gaar ah ayaan u jilicsanahay, in kastoo. Ilaa maanta waxaan diiday $ 12,000. Taasi waxay umuuqan kartaa lacag aad u tiro badan in la diido, laakiin halista ayaa ah inaan dhillo balooggeyga oo Google igu tuuro xabsiga ( tusmo dheeri ah).
Sawirka weyn, ma hubo taas Google wuu ka gudbi karaa isku xirka lacag bixinta fiasco. Waxay u egtahay sida dadka qaar ay u adeegsanayaan sharciyada culeyska iyo Google waxay isku dayeysaa inay la dagaallanto sharciyada dabiiciga.
Kuwaas Microsoft Guys waa kuwo dhalaalaya!
Kuma dhiirrigelin qoraalkan, laakiin sidii aan ku baaray qoraalkan ayaan helay Microsoft sii daayay a Qaabka ku-tiirsan gravitation-ka ee soo-helidda macluumaadka warqad bishii Ogos 2005. Xiiso badan.
Tags: bingcufMicrosoftPagerankPagerank algorithmdarajeeyoSEO